पूर्वयुवराज पारस र छोरा हृदयेन्द्रको भयो यस्तो मिलन! – PathivaraOnline
Home > समाचार > पूर्वयुवराज पारस र छोरा हृदयेन्द्रको भयो यस्तो मिलन!
मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि लामो समय थाइल्याण्ड बसेका पूर्व युवराज पारस शाहको पछिल्लो वर्षदेखि पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको देखिन्छ । थाइल्याण्ड युवतीको प्रेममा परेर आफ्नी श्रीमती हिमानी र छोराछोरीलाई समेत बेवास्ता गरेर बैंककमा बसेका पूर्वयुवराज २०७१को अन्त्यतिर नेपाल फर्किएका थिए ।
त्यसपछि आक्कलझुक्कल छोराछोरी र बहिनीहरुलाई भेटे पनि अन्य पारिवारिक सदस्यहरुसँगको भेट गर्न नदिइएको भनिएको थियो ।तर, पछिल्लो वर्ष पारसको पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो रहेको देखिन्छ ।
सरकारले माग्यो २ सय ३२ जना जासूस, एसएलसी पास गरेकाले पनि भर्न पाउने (विज्ञापन सहित)
रिना रहस्यमय मृत्यु प्रकरणः आमा भन्छिन्,‘ छोरीले न्याय पाउने आशामा छौं’ – भिडियो हेर्नुहाेस्